Hargeysa CityPages (Hargeysaawi) – Somaliland & World News Journal !
Hargeysa CityPages (Hargeysaawi)
Home > Hargeysa CityPages (Hargeysaawi)
Wargeyska Hargeysaawi (Hargeysa CityPages), waa wargeys toddobaadle ah oo ka soo baxa caasimadda, taasoo aanu ku soo bandhigno sheekooyin, wareysiyo, barnaamijyo & dhacdooyin xiiso leh oo la xidhiidha dadweynaha ku nool dalka gudihiisa ama daafaha kala duwan ee caalamka.
Waxaanu si gaar ah uga sheekeyn doonaa; waxyaalaha (events) ka socda magaalada ama dalka dibaddiisa toddobaadkaas ama toddobaadyada soo socda.
Hargyesa CityPages ama Hargeysaawi waxuu ku soo baxaa luqadaha Somali & English.Waxuuna ku soo kala baxaa laba qaab, qaab daabacaad ah oo aad ka heli karto goobaha bulshadu isagu timaado & goobaha waaweyn ee la seexdo (Hotels) & qaabka kale ee e-journal oo aanu kuugu soo direyno emailkaaga.
Haddii aad dooneyso inaad la socoto dhacdooyinka magaalada ama aad dooneyso inaad ka mid noqoto qoraayaasheena xorta ah (freelancers/contrabutors), fadlan nala soo soo xiriir, waanu ku soo dhaweyneynaa.
Haddii aad dooneyso inaad ku xayeysiisato Wargeyska Hargeysaawi (Hargeysa CityPages), fadlan, noo soo dir e-mail, adigoo ku soo lifaaqaya magacaaga, ujeedaada & teleefoonkii aan kaala soo xiriiri laheyn.
Fadlan noo soo dir e-mailkaaga, si aan kuugu soo dirro Wargeyska Hargeysaawi (Hargeisa CityPages) Khamiis kasta ka filo emailkaaga.
nagala soo xidhiidh:: hargeysaawinews@gmail.com
Maamulka Hargyesa CityPages